Manao pôtilita sy filôzôfy amerikana, i Thomas Jefferson niteraka tamin'ny 18 Aprily 1743 tany Shadwell ary maty tany Monticello tamin'ny 1826. Izy no filoha faha telo ny Etazonia, nihiditra filoha tamin'ny 1801 izy, dia tapitra tamin'ny 1809 ny mandat-ny. Filôzôfy, mpamorina sy mpanao trano i Thomas Jefferson ary tsy nasitriny ny fitiavany frantsay. Nanana voly be mihintsy izy any Virginia, ary nanana andevo betsaka izy. Kanefa izy nitolona ho an'ny fanohanana ny Déclaration des Droits de l'homme anatin'ny firenenany. Nanangeza ny fivelaran'i Etazonia i Thomas Jefferson tamin'ny nividy ny Louisiana. 3 Président d'Etazonia'
I Thomas Jefferson sy ny soniany
Teraka tamin'ny 13 Aprily 1743 i Thomas Jefferson tany Shadwell ao anatin'ny kaontia an'i Albelmarle, any Virginia. An'isan'ny fianakavina manan-karena ny ray aman-dreniny : Peter Jefferson sy Jane Randolph. Laha matoa-na amin'ny fianakavina manana zanaka folo i Thomas Jefferson. Topon-na voly iray i rainy any amin'ny kaontia ny Albemarle. Tian'ny rainy ambony fianarana ny zanany Thomas.
Tamin'ny 1752, mandeha any am-pianarana hetin'i William Douglas i Thomas Jefferson, ary nampianatra azy fiteny maro : fiteny latina, fiteny grika taloha sy fiteny frantsay. Tamin'ny nahafatesan'i rainy tamin'ny 1757 (14 taona i T.J tamin'io andro io), nandovan'ilay voly sy ny andevo aman-polo i Thomas Jefferson. Nihanatra ny siansa natoraly sy ny tantara i Thomas Jefferson any Fredericksburg, nampianarin'i James Maury.
Nanomboka nihanatra tany amin'ny College of William and Mary any Williamsburg i Thomas Jefferson tamin'ny 1760, ary tany izy nihanatra ny bôtanika, ny fidinihan-tsaritany, ny grika, ny latina, ny right, ny tantara sy ny filôzôfia). Manatsara ny frantsay izy tany. I William Small, ny mpampianatra toe-tsainan'i Thomas Jefferson, nanome azy tsirony amin'ny mpanoratra John Locke, Francis Bacon, Isaac Newton ary ampianarin'i W. Shell mampiasa ny fisalasalana ara-paika izy. Nahazo diplôma i T.J tamin'ny 1762.
Tamin'ny 1767, nahazo seza any amin'ny toeran'i mpanan-karena ny Virginia i Thomas Jefferson hatramin'ny 1775. Fa eo aorian'ny fimaizan'ny tranom-pianakavinany, nanamboatra trano afa tany Monticello (ankehitriny) i Jefferson. Nanam-bady vehivavy maty-vady i Jeffferson : i Martha Wayles Skelton ; ary nanana zanaka enina izy : i Martha (1772-1836), i Jane (1774-1775), zaza maty teo am-pahaterahana (1777), i Mary (1778-1804), i Lucy Elisabeth (1780-1781) ary i Lucy Elisabeth II (1782-1784)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Jefferson&oldid=810263"
Dernière modification le 31 Janoary 2018, à 06:51
Voaova farany tamin'ny 31 Janoary 2018 amin'ny 06:51 ity pejy ity.